Musangano weNyika Dzine Nzou Unopetwa kuHwange Nyika Dzine Nzou Dzichikurudzira CITES Kuti Isapindira Muzvirongwa Zvadzo
Zimbabwe inoti ine nzou dzinodarika zviuru zana uye nyanga dzakawandisa.
Musangano wemazuva matatu wekutsvaga nzira dzekuti nyika dzemuAfrica dzine nzou dzitaure nezwi rimwechete kumusangano weCOP uchaitwa mukupera kwegore rino, uyo wakanga uchiitirwa kuHwange wkapetwa nemusi weChina, makurukota ezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa akapinda mumusangano uyu achiti sangano reConvention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora kana kuti CITES haifanirwe kupindira mukutengeswa kwenyanga dzenzou nenyika dzakazvimirira.
Makurkota emunyika dzemuAfrica aya akati nyika dzakazvimirira dzine kodzero dzadzo dzekushandisa zviwanikwa zvadzo sezviri mumitemo yadzo.
Musangano uyu wakabuda nechibvumirano cheHwange Declaration, icho chine zvisungo gumi nezvina, zvinosanganisira chekuti sangano re CITES rinofanirwa kuongorora zvakare zvisungo zvaro panyaya yekutengeswa kwenyanga dzenzou.
Nyika dzine nzou idzi dzakakurudzirwa kuti dzitambirewo chibvumirano cheHwange Declaration ichi.
Zimbabwe iri kuda kuti ibvumidzwe kutengesa nyanga dzayo dzenzou dzainoti dzakawandisa. Hurumende yakambotiwo inogona kubuda mugungano reCITES kana zvido zvayo zvakasatevedzerwa.
Mukuru wesangano reCentre for Natural Resource Governance, VaFarai Maguwu musangano uyu wavive musangano wakakosha zvikuru asi donzvo riri kurwirwa nemakurukota akapinda mumusangano kusanganisira weZimbabwe rakanangana nekuuraya nzou, izvo zviri kurambwa nesangano reCITES.